China PTFE Slider ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပံ့ပိုးသူများနှင့်စက်ရုံ - Taifno PTFE
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > PTFE ထုတ်ကုန်များ > PTFE စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန် > PTFE Slider
PTFE မှိုစာရွက်ကို PTFE granular resin ဖြင့်ပုံသွင်းခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ PTFE သည်လူသိများသောပလတ်စတစ်အားလုံး၏အကောင်းဆုံးဓာတုပစ္စည်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အသက်မအိုပါဘူး ၎င်းသည်သိပြီးဖြစ်သောအစိုင်အခဲပစ္စည်းများအားလုံး၏အနိမ့်ဆုံးမြှောက်ဖော်ကိန်းနှင့်သုည ၁၈၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှသုည ၂၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိကျယ်ပြန့်သောလက်တွေ့အပူချိန်ရှိသည်။
1. အထူ: 0.05-100mm
2. အရွယ်အစား: 600x600mm
3. RoHS SGS လက်မှတ်။
4. မြင့်မားသောတောက်ပနှင့် Hard မျက်နှာပြင်။
PTFE မှိုစာရွက်ကို PTFE granular resin ဖြင့်ပုံသွင်းခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ PTFE သည်လူသိများသောပလတ်စတစ်အားလုံး၏အကောင်းဆုံးဓာတုပစ္စည်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အသက်မအိုပါဘူး ၎င်းသည်သိပြီးဖြစ်သောအစိုင်အခဲပစ္စည်းများအားလုံး၏ပွတ်တိုက်မှုနိမ့်ဆုံးကိန်းနှင့်သုည ၁၈၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှသုည ၂၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိကျယ်ပြန့်သောလက်တွေ့အပူချိန်ရှိသည်။
၁) ဆန့်သောစွမ်းအား - ၁၅ Mpa
၂။ elongation နှုန်းကိုချိုးသည် - ၁၅၀%
၆) မြင့်မားသောဓာတုဗေဒဂုဏ်သတ္တိများ - သုည ၁၈၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှသုည ၂၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိကျယ်ပြန့်သောအလုပ်လုပ်နိုင်သောအပူချိန်အကွာအဝေး
၎င်းကိုလေကြောင်း၊ ရေကြောင်း၊ ရေနံ၊ ရေနံဓာတု၊ သတ္တုဓာတ်၊ လျှပ်စစ်၊ စက္ကူထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အင်ဂျင်နီယာ၊ ဆေးဝါး၊ ၎င်းသည်အနားကွပ်များနှင့်ကွန်တိန်နာအမျိုးမျိုးအတွက်အကောင်းဆုံးတံဆိပ်ခတ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
Gms / cc
Compressivestrengthat1% def ။
1,23 × 10-4
- 50 မှ 250
(ဇီဝဗေဒ, ဆေးဝါး, အစားအစာနှင့်သက်ဆိုင်သော)
- 50 မှ 280
(ဇီ ၀ မဟုတ်သော / အစားအစာ၊ ဆေးဝါးဆိုင်ရာအပလီကေးရှင်း)
အစိုဓာတ်ကို / အရည်ပျော်ပစ္စည်းစုပ်ယူ
အလွန်မြင့်မားသော fluorinatingagents မှအပ
Taifno PTFE သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ptfe slider ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများထဲတွင်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုကို ptfe slider စက်တပ်ဆင်ထားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှကြိုဆိုပါသည်။
hot Tags:: PTFE Slider, တရုတ်, ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ပေးသွင်းသူများ, ကုမ္ပဏီ, လက်ကား, အရည်အသွေးမြင့်, စျေး, အမှတ်တံဆိပ်
PTFE ပလပ် Plug
PTFE Little ကရှားပါးပစ္စည်း